Maitiro Ekuchenjera Anobatsira Sei Mabhizinesi | Martech Zone
Artificial Intelligence iri kupenya zvakajeka muindasitiri ye software nehunyanzvi hwayo. Makambani ari kuisa mari pahuchenjeri hwekugadzira sezvo ichiramba ichiwedzera uye ichichinja. Mumakore mashoma apfuura, isu takanzwa yakawanda yekubudirira nyaya maererano nehungwaru hwekunyepedzera. Kubva kubva kuAmazon mashandiro anoita GE kuchengetedza michina yayo kumhanya, huchenjeri hwekugadzira hwave hwakanyanya.
Munyika yanhasi, kwete chete makambani makuru asiwo maindasitiri madiki ari kubudawo muhuwandu. Artificial Intelligence ine akasiyana maturusi ayo anogona kubatsira madiki uye epakati-saizi maindasitiri kuvandudza iwo kugadzirwa uye kugona.
5 Nzira dzeArtificial Intelligence Dzinogona Kubatsira Bhizinesi Rako
Rubatsiro kubva kune wezwi-wekutsvaga mubatsiri - Mubatsiri wekutsvaga wezwi anogona kukubatsira chero nguva uye chero kupi. Anonyanya kuzivikanwa izwi rekutsvaga mubatsiri ndiSiri anouya pamakomputa eIOS nemidziyo. Kune mamwezve mazwi-ekutsvagisa vabatsiri senge Google mubatsiri uye Bixby, iri kuuya nyowani pane Samsung zvishandiso. Nekushandisa kwekunyepedzera njere, ivo vanzwi vekutsvaga vanobatsira vanogona kubatsira mukuvapa iwo ruzivo rwavanoda. AI inogona zvakare kushandiswa sechishandiso kubatsira kubvisa mutoro kubva pamunhu. Mhinduro dzakakurumbira ndedze Google, Microsoft, Amazon, uye Dialogflow.
Kusarudza musika-kukodzera - To nzwisisa chikamu chevatengi, njere dzekunyepedzera dzinogona kushandiswa sechishandiso kuona kuti chigadzirwa-musika chakakodzera. Izvi zvinogona kuitwa nekutepa simba rekudzidza kwemuchina kuti unzwisise chikamu chemutengi. Chero sangano rebhizinesi rinogona kushandisa huchenjeri hwekugadzira kuongorora uye kuunganidza musika analytics nekukurumidza. Nekushandisa njere dzekunyepedzera, masangano anogona kupenya mukushambadzira zvese zvechinyakare uye zvepamhepo zvinangwa. Artificial Intelligence inopa chero bhizinesi njere mukutarisa kwavo base kwevatengi. Mumwe mupi anotarisa pane chikamu chevatengi achishandisa AI iri Lexer.
Chizvarwa chevashandi kusimudzira kubatanidzwa - Haasi ese mabhizinesi anozove nekwaniso yekuhaya HR munhu. Mabhizimusi akadaro anogona kushandisa huchenjeri hwekunyepedzera kuongorora kubatanidzwa kwevashandi pamwe nezvinodiwa mukusimudzira. Artificial Intelligence zvakare inounganidza zvipindidzo zvekuita kwemushandi. Kunetsekana kwemumwe neumwe mushandi uye ake / ake mapindiro anogona zvakare kugovaniswa vachishandisa zvekushandisa njere maturusi. Iri ibasa rekutanga-up muvambi uye muridzi webhizinesi, kuisa majekiseni akanaka munzvimbo yebasa kuitira kuti vagone kuvimbisa kuti nhengo dzeboka ravo dzinogona kunzwisisa izvo zvinokanganisa uye zvinonetsa. Muenzaniso ndewe AmplifAI Mhinduro.
Kuvandudza sevhisi - Kuvandudza rutsigiro rwevatengi uye vatengi mabasa esangano rebhizinesi, huchenjeri hwekugadzira hunogona kubatsira mukubatsira vashandi. Artificial Intelligence inogona kushandiswa pakuronga vatengi matikiti ekufambisa, kupindura yavo mubvunzo online etc. Aya ekunyepedzera njere zvishandiso zvinogona zvakare kubatsira mabhizimusi madiki mashoma kuendesa masevhisi nenzira inoshanda. Nekushandisa kweAI maturusi, pachave nekuwedzera mukugutsikana kwevatengi uye kuita.
Kushandiswa kwemhinduro yakagadzirirwa - Artificial Intelligence maturusi anokwanisa kugadzirisa uye kugadzirisa matambudziko mazhinji uye mabasa ezuva nezuva munzvimbo dzehofisi nekuwanda kwekuzvipira. AI maturusi anoita mabasa akasiyana siyana senge manejimendi manejimendi yekupa marezinesi ebhizinesi Artificial Intelligence yakavakirwa mapuratifomu inobvumira vatengi kuve nekutonga pamusoro pezvekutengesa nzvimbo dzekuhaya. Salesforce Einstein, IBM Watson Studio, Google Cloud AI, Azure Machine Kufunda Studio, uye AWS Machine Kudzidza zvishandiso zvinotungamira iyo indasitiri.
Zvese zviri pamusoro zvekunyepedzera maturusi maturusi zvinoita kuti mabhizinesi akwikwidze. Rimwe remabasa anoitwa zvakanyanya uchishandisa AI manejimendi ezuva nezuva kutaurirana, kuunganidza data analytics, kuronga musangano uye zvimwe zvakawanda. Nekubatsirwa kwehungwaru hwekunyepedzera, mabhizimusi madiki nepakati ari kuvandudza mashandiro avo nekuteerera mushambadziro yesoftware… anokwanisa kukwikwidza nemasangano makuru kwazvo.
Kune nzira dzakasiyana dzekuti iwe unatsiridze bhizinesi rako zviyero nekushandisa kwekunyepedzera ungwaru, kusanganisira:
Ita kuti kutengesa kwako kukwire nekushambadzira: Artificial Intelligence-yakavakirwa maturusi anogona kubatsira bhizinesi rako zuva nezuva musika kugadzirisa, ruzivo rwevatengi-kutengesa, kugadzirisa matambudziko etc. AI zvikumbiro zvinochera zvakadzika muzvikumbiro zvinoitwa nemutengi kuitira kuti upe mhinduro dziri nani uye dzakaringana. AI inogona zvakare kushandiswa mukukurudzira vatengi vako nezvimwe zvinhu, nekuongorora zvigadzirwa zvavanoshandisa kana zvavakashandisa. Unogona kutsvaga nzira idzo mitengo yako inogona kukwidziridzwa uye unzwisise makwikwi ako. AI kunyorera kunobatsira kuisa pamberi vatengi vako uye kunoshandira kwakanaka kupihwa manejimendi.
Gonesa manejimendi manejimendi manejimendi:AI kunyorera kunogona kubatsira mabhizinesi kubata zvinyorwa zvavo zvakanaka. Iyi ndiyo nzira yakanakisa yekukwiridzira maketeni ekupa uye kugadzirisa zvakare kuzadza. Artificial Intelligence kunyorera kuchakubatsira iwe kugadzirisa yako odha manejimendi uye kuzadzisa yako bhizinesi maitiro.
Kuvandudza kushanda kwekuchengetedza uye kugadzirisa:AI inogona kubatsira bhizinesi rako kunatsiridza marongero aro ekugadzirisa, kunyanya mumatunhu ekufambisa nekugadzira. Semuenzaniso, indasitiri yendege inoshandisa zvemuchadenga zvekuita zvehunyanzvi yekuitisa tarisiro yekutarisa. Iko kusakara uye kubvaruka kwezvimakanika zvikamu muindasitiri yendege zvinogona kuteverwa uchishandisa AI mashandisirwo. Aya mafomu anogona kukubatsira iwe kugadzira mashedhi ekuchengetedza ekuvandudza zvirinani. Izvi pakupedzisira zvinodzivirira mu-kudikanwa kunonoka kuendesa ruzivo uye kuongorora.
Kudzivirira mhosva dzepamhepo:Masangano emabhizinesi anotambisa nguva yakawanda kuyedza kutsvaga kwekubiridzira. Sezvo paine mapatani aripo muhungwaru hwekunyepedzera, maturusi anogona kushandiswa kutsvaga kwekutyisidzira kwekuchengeteka. Nekushandisa AI maturusi, panogona kuve nekudzikira muhuwandu hwenhema alarm yatinogamuchira sezvo isiri mitemo inoenderana nekushandisa
Uchishandisa wega-inotyairwa matekinoroji:Kune akawanda mabhizinesi anodikanwa kutakura zvigadzirwa muhuwandu. Mabhizinesi akadaro anoenderana nemaitiro ehungwaru ekugadzira. AI masisitimu anokwanisa kushandiswa kutakura nekuti anozovabatsira kudzikisa mutengo uye kuratidza kuva vakavimbika kupfuura mota dzinotyairwa nevanhu. Mari yekufambisa inogona zvakare kuponeswa nekushandisa masisitimu ehungwaru.
Bhadhara vakanyanya kukwikwidza: Kutsvaga vakanakisa musarudzo uye kuvashandira kune rako bhizinesi, inguva yakanyanya kutora basa. Ichi ndicho chikonzero nei kungwara kwekunyepedzera kuri kuve nekwaniso yekutarisana nekuzivikanwa. Nekushandisa AI kunyorera, vashandirwi vanogona kuitisa mabvunzurudzo zvichibva pane seti yemanzwiro cues ayo akambotemerwa. Mukuita kudaro, zvinobatsira rako bhizinesi kugadzirisa mashandiro ekutsvaga.
Kuita sarudzo dzakanaka dzebhizinesi:Chero data harina basa kana risina kuongororwa zvakanaka. Nekugamuchira chinodikanwa chinobuda, iwe unofanirwa kudzidza kubva kune iyo data inowanikwa. Unogona kuvimba zvizere nekushandisa kwekuchenjera kwekuita kuti basa rako rive nyore. AI inogona kuwana mapatani uye mapateni aya anogona kushandiswa mukuvandudza matekinoroji uye matekinoroji ekuchengetedza ebhizinesi rako.
Nekudaro, idzi ndidzo nzira dzekuvandudza yako bhizinesi zviyero uchishandisa zvekunyepedzera kunyorera uye maturusi. Nekudaro, rako bhizinesi rinozogadzirisira purofiti zvirinani uye kuwana chinzvimbo chakanaka mumusika.